Kiobà: Las Damas de Blanco · Global Voices teny Malagasy
Kiobà: Las Damas de Blanco
Voadika ny 03 Mey 2018 6:52 GMT
(Nivoaka tamin'ny 30 avrily 2008 ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy)
“‘Andalam-pahafatesana ry zareo, andalam-pahafatesana ry zareo.’
Izany no tarainan'ny iray amin'ireo vehivavy azo isaina amin'ny rantsan-tanana miakanjo fotsy nikasa ny hanao fihetsikesehana am-pilaminana tao Havana…”
– Ninety miles away…. in another country [sivifolo maily any ho any… any amin'ny firenena hafa]
Izany no lohahevitra nifampiresahana indrindra tao amin'ny tontolon'ny bilaogy kiobàna nandritra ny herinandro mahery: ny fisamborana ireo Las Damas de Blanco [Vehivavy manao akanjo fotsy] raha nanatontosa fihetsiketseham-panoherana milamina ho famotsorana ny vadiny, nogadrain'ny fitondran'i Castro ry zareo.
Ary ho fanasongadinana ny fiantraikany, namoaka andian-tsary sy lahatsarin'ny zava-nitranga i Free Thoughts, raha ao amin'ny Revista de Asignaturas Cubanas [es], namoaka saripika nalain'i Bárbara Jiménez avy ao amin'ny vondron'ny vehivavy mialoha ny nanesorana azy i Laura Pollán a Dama de Blanco ary nampiana fanazavana izany.
Child of the Revolution mamakafaka ny anjara toeran'ny fampitam-baovao amin'ny famolavolana ny fomba fijery amin'ny lanonana:
Ny henatra iray manontolo dia voapikan'ny mpano gazetin'ny fampitam-baovao vahiny ao Havana ary naely tamin'ny ambin'izao tontolo izao, na dia noferana am-pandanjalanjana ny fitateram-baovao.
Roa andro taty aoriana, nampiasa ireo fitaovana fampitam-baovaony ny fitondrana hamelezana mivantana ny Damas de Blanco. Raha tokony hanao izay mahazatra azy ireo tsy miraharaha ny fihetsiketsehana, miampanga mivantana ireo vehivavy ho singa mpamily lalana sy mpikarama an'adin'ireo Amerikana masiaka ireo ny fitondrana.
Nanazava izy avy eo fa:
Ampangain'ireo vehivavy ankehitriny ny fitondran'i Castro ho mitsikilo azy ireo, taorian'ny fampielezan'ny fampitam-baovao ofisialy ny resaka an-telefonina nifanaovan'ny sasantsasany amin'ny Damas de Blanco sy ny vehivavy iray mpikambana amin'ny kongresy ao Etazonia…
The Cuban Triangle mandrohy amin'ny tati-baovaon'ny BBC avy ao Havana fa “mametraka ny katroka ao anatin'ny hetsika fanoherana manontolo”:
Ireo Damas ireo, hoy ny nosoratan'i Fernando Ravsberg solontenan-gazety, no “hany vondrona mpisintaka manao hetsika an-dalambe. Fa ny ambony amin'ireo mpanohitra kosa mametra ny asany anaty trano, amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, fivoriana, ary fanambaràna.” Nosoritsoritan'i Ravsberg ny fisarahan-kevitra ao anatin'ny hetsika ao amin'ny resaka politika sy ny teti-panorona eo anoloan'ny governemanta izay “manambara fiovana efa ho isa-kerinandro, izay voarain'ny vahoaka tsara ny ankamaroan'izany.” Ny hetsika, araka ny nosoratany, dia “kely, misaratsaraka, ary kely ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina.”
Matoky aho fa maro no hamaky izany ho tsikera, saingy mitarika amin'ny amin'ny fanontaniana mahaliana i Ravsberg. Raha mitohy ny fiovàna ao Kiobà, ary indrindra fa mahatratra ny Kiobàna rehetra ny fiovàna fanampiny, fa tsy ireo manambola vahiny holaniana ihany, hanova ny tokotany politika izay iasan'ny mpanohitra ve izany fiovana izany? Hanova tetipanorona ve? Tokony ve?
La primera generación mihevitra fa “nanitsakitsaka ny Fanambaràna manerantany momba ny Zon'olombelona izay nosoniaviny i Kiobà”, ary nampiany:
Milaza ny alahelony tamin'izany hetsika [fisamborana] izany i Etazonia ary navoakany ho talaky masoandro izany fanitsakitsahana izany. Misy olona eo ankilan'i Etazonia ve hanao zavatra momba izany?
Osvaldo Alfonso Valdés avy ao amin'ny Miscelaneas de Cuba [es] mametraka ny fomba fijeriny amin'izay lazain'ny hetsika momba ilay fitondrana vao nitsangana:
Aleo ambara mazava: raha tsy mahazaka vehivavy folo milamina sy manolotra taratasy ampahibemaso ho an'ny governemanta, dia fiovana sy fanatsarana ny zo fototra sy fiovana politika eo amin'ny demaokrasia manao ahoana moa no azontsika antenainy amin'ity governemanta vaovao amin'ny didi-jadona kiobàna ity?
Farany, Uncommon Sense namoaka fanavaozam-baovao:
Nitatitra ny Radio Martí fa niverina nanao ny fihetsiketsehana fanaony isan-kerinandro ho famotsorana ireo vadiny, rainy, zananilahy ary anadahiny ry Damas de Blanco [Vehivavy manao Fotsy] tsy ampy herinandro nigidragidràna sy nisamboran'ny polisy sy vondron'olona mpiondana Castro ireo vehivavy folo [namany].
Tsy tahaka izany nitranga tamin'ny 21 avrily, navela irery teo ireo vehivavy ireo rehefa mandeha am-pahanginana nanavatsava ny Lalambe Fahadimy ao Havana ry zareo.
Nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Eduardo Avila.